सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने,कहिले देखि खुल्छन गाडी ? - Mountain Media
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने,कहिले देखि खुल्छन गाडी ?
काठमाडौ । महामारीका कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञा अझै पनि जारी छ । सार्वजनिक सवारी साधन संचालन भएका छैनन् । सार्वजनिक सवारी संचालन नहुँदै त्यसो भाडा भने बढाउनुपर्ने निष्कर्ष सरकारी निकायले निकालेको छ । सार्वजनिक वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भाडा बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।
२०६९ सालदेखि वैज्ञानिक रुपमा भाडा समययोजन नभएको उल्लेख गर्दै भाडा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ब्यवसायीले पनि भाडा समायोजन नगरिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तेलको मूल्यमा भएको घटबढका आधारमा पटक(पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ ।
सरकारले २०६५ फागुन २० गते वैज्ञानिक भाडादर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । अहिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभागले कति प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर किटान भने गरेको छैन ।
Previous: गण्डकी प्रदेशमा भाँडभैलो : मन्त्री आचार्यले लिन मानेनन् उर्जा मन्त्रालय,दिपक मनाङे भन्छन्”मलाई मुख्यमन्त्री नै चाहिन्छ”
Next: लाखौं मानिसले यसरी एकैपटक राजधानी छोड्न लागेपछि बंगलादेशमा सेना परिचालन हुँदै,अवस्था भयावह